Canada arrive for first-ever Zim tour - DailyNews Live
Canada arrive for first-ever Zim tour
Sports Writer/Cricinfo • 4 January 2015 7:10AM • 0 comments
HARARE - Canada arrived in Harare yesterday for four fifty-over matches which will form part of Zimbabwe’s preparations for the 2015 World Cup and ahead of the Canadians’ World Cricket League Division 2 campaign.
All the matches will take place at Harare Sports Club between January 6 and 12 and Zimbabwe will field an A squad, coached by former first-class player Shepherd Makunura.
The games will afford new Zimbabwe coach Dav Whatmore an opportunity to assess candidates for the World Cup squad which must be named by January 7.
Whatmore, who began work on Friday, inherits a team that has recently returned from an 8-0 blanking in Bangladesh after losing all three Tests and five ODIs and which has little more than a month to prepare for the World Cup.
Canada, who lost ODI status in February, have never toured Zimbabwe and only played against them twice. They lost both games — one a tri-series fixture in Port-of-Spain in 2006 and the other a group stage match at the 2011 World Cup — although those matches were against a full Zimbabwe international side and not an A team.